Thwebula Tom Airbus A330-200MRTT FSX - Rikoooo
Usayizi 45.5 MB
Play 24 906
Umbhali: Isibonelo sikaThomas Ruth, Izibuyekezo zikaChris Evans & Louis Quintero & Rikoooo
Kubuyekeziwe on 03 / 06 / 2018: Manje ihambisana ne-Prepar3D v4 +, ama-liveries amabili: i-German Tanker ne-RAAF, ama-gauge amasha, izakhiwo ezintsha ze-HD zepakpitini ebonakalayo, umsindo omusha, iphaneli entsha ye-2d, eyongezwe i-FMC, eyongezwe i-Autoland CAT II no-III, yanezela i-Airbus GPWS.
I-tanker yekhwalithi ephezulu kakhulu kunoma iyiphi inguqulo ye-FSX ne-Prepar3D. Iza ne-cockpit yangempela kanye nemisindo yangokwezifiso. Hlanganisa nemikhakha ye-refueling esebenzayo nokusebenza, funda ibhukwana ukuze ufunde ukuthi ungayisebenzisa kanjani.
Ngezansi kwesithombe sephaneli ye-refueling ramps (umbuthano obomvu) itholakale kuphela kusuka phezulu kwe-cockpit yangaphambili.
Origins kanye nencazelo indiza yangempela:
I A330 Multi Indima Tanker Tekutfutsa (MRTT) iyinhlangano esuselwe lempi Airbus A330-200 airliner. It yakhelwe njengoba ezimbili-indima air-to-air refueling kanye ezokuthutha izindiza. Ukuze air-to-air refueling ohambweni the A330 MRTT kungenziwa ifakwe inhlanganisela yiziphi izinhlelo ezilandelayo:
* Airbus Military Aerial Refuelling Boom System (ARBS) for ayesisebenzisa-wahlomisa receiver izindiza.
* Cobham 905E ngaphansi-wing refueling pods for probe-wahlomisa receiver izindiza.
* Cobham 805E fuselage Refuelling Unit (Fru) for probe-wahlomisa receiver izindiza
* Universal Aerial Refuelling iyatholakala System Ukufakwa (UARRSI) self-refueling.
I A330 MRTT has a maximum uphethiloli umthamo of 111,000 kg (245,000 LB). Standard uphethiloli umthamo ivumela ukuthutha i ezengeziwe 45,000 kg wezimpahla. Iphiko A330 MRTT sika has isakhiwo esifana ngakho ezine-injini A340-200 / -300 nge kwagcizelela izindawo obandayo for izinjini the A340 sika esasinenjini engaphandle. Ngakho Iphiko A330 MRTT kudinga ukuguqulwa kancane ngokusetshenziswa kwalezi hardpoints for pods iphiko refueling.
I A330 MRTT gumbi yakhelwe ukuqinisekisa zihlalo elikhulu ukucupha ku nalelo likilasi, ukuthi kwenyuswe kokubili umthamo kanye nenduduzo. I gumbi kungenziwa amisiwe in ezihlukahlukene enkulu Izakhiwo kusukela 253 izihlalo ukuhlelwa ekilasini ezintathu, ngokusebenzisa abagibeli 298 in a ukumisa-class amabili, ukuze 380 abagibeli ukumisa ekilasini olulodwa. I gumbi is banikwa i design ekhangayo zanamuhla. Lezi zici sikwazi uhla oluphelele ukucupha kusukela kunakekelwa impi zokuhamba ngokwezifiso eziyinkimbinkimbi efanelekayo VIP guest ohambweni. An ozikhethela Crew Rest Gumbi (CRC), elise endlwaneni eyakhiwe phambili ingafakwa for crew spare ukuze kwandiswe isikhathi etholakalayo a mission. I gumbi Umgibeli kule A330 MRTT unganikezwa nge iqoqo airstairs esikhiphekayo ukuze sikwazi nabagibeli abangu ukungena futhi ushiye indiza uma airbridges noma emhlabathini amathuluzi okusebenza awatholakali.
I A330 MRTT kungabuye amisiwe ukwenza Zokuphuma Ezindaweni Ezinenhlekelele Medical (Medevac) ohambweni. I yobukhulu enkulu fuselage evumela esiphezulu eguquguqukayo kanye kuqinisekisa uyoziduduza zonke iziguli, isib kuze kufinyelele 130 stretchers standard theka.
Njengomphostoli A330-200, lo A330 MRTT kuhlanganisa ezimbili emphemeni ephansi cargo linezingxenye (phambili kanye aft) kanye bulk endaweni khono lapho eminye ubonisa yizinhlobonhlobo indiza. I hold cargo kushintshiwe ukuze bakwazi ukuthutha up to 8 Pallets wezempi ngaphezu ULD engalwi.
Ukuba yizinhlobonhlobo we A330 MRTT kwenza inqwaba ongakhetha cargo uyiswe ku ozikhethela main emphemeni cargo gumbi. Ibhayisikobho iziqukathi standard commercial futhi Pallets ngokusebenzisa ezempi, ISO futhi NATO Pallets (kuhlanganise izihlalo) iziqukathi, ukuze nezempi kanye nezinye izinto ezinkulu zazo egcwele ekhuluma ngalé komnyango wezimpahla.
Standard commercial A330-200s ekubeni Airbus Final Assembly Line Toulouse (France) ukuze Airbus Military Ukuguquka Centre e Getafe (Spain) for olufanelekayo izinhlelo refueling kanye Avionics ezempi. Ukulethwa lokuqala ikhasimende kwethulwa, Australia ehleliwe maphakathi no-2010. Qantas Defence Services uvusa asele ezine A330-200s at Brisbane Airport yayo luhlobo egameni Eads for the RAAF.
I-Tom Airbus i-A330 MRTT FSX ne-P3D Thwebula
Incazelo 76 188
Incazelo 48 873
Incazelo 28 143
Incazelo 28 624
Incazelo 49 551
Incazelo 23 282
Incazelo 58 534
Incazelo 49 619
Incazelo 71 934